HP Deskjet IA 3835 All-in-One (Print, copy, scan, wireless, fax): သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် "Ink Jet" ကို အွန်လိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ | Shop.com.mm
ကုန်ပစ္စည်းHP Deskjet IA 3835 All-in-One (Print, copy, scan, wireless, fax)အကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်
နာမည်ကြီး HP အမှတ်တံဆိပ် Deskjet IA 3835 မော်ဒယ်လ်သည် ဘက်စုံသုံး printer ဖြစ်သည်။ Print ထုတ်ရာတွင် မြန်ဆန်မှုရှိပြီး Color Print ကိုလည်း ထုတ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Input capacity မှာ စာရွက်ရေပေါင်း ၆၀ ဖြစ်ပြီး Output capacity မှာ စာရွက်ရေပေါင်း ၂၅ ရွက် ဖြစ်ပါသည်။ Black Cartridge ရွက်ရေ ၃၆၀ ထုတ်နိုင်ပြီး Colour Cartridge ရွက်ရေ ၂၀၀ ထုတ်နိုင်သည်။ Print ထုတ်နိုင်သော speed မှာ တစ်မိနစ်လျှင် အဖြူအမည်းစာရွက်အရေအတွက် ၂၀ ရွက် နှင့် ကာလာစာရွက်အရေအတွက် ၁၆ ရွက် ဖြစ်ပါသည်။ Print Resolution မှာ အဖြူ အမည်း 1200x1200 dpi ဖြစ်ပြီး ကာလာအနေဖြင့် 4800 x 1200 dpi ရရှိမှာပါ။ နှစ်ဖက်ကျောကပ်စာရွက်ထုတ်နိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သောစာရွက်ဆိုဒ်မှာ A4 နှင့် Legal အထိရပါသည်။ တစ်လလျှင် စာရွက်ရေ ၁၀၀ မှ၂၅၀ နီးပါး ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ၂.၂ touch screen ပါရှိသောကြောင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Plain paper, photo paper, brochure paper, envelopes and other specialty inkjet papers အစရှိသော စာရွက်အမျိုးအစားများဖြင့်လည်း Print Out ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Wireless network ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လွယ်ကူစွာ Print ထုတ်နိုင်သည့်အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာစေမှာ ဖြစ်သည်။ Microsoft OS ဖြင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် Android device များကိုလည်း wireless နည်းပညာဖြင့် အလွယ်တကူချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Scan အမျိုးအစားမှာ Flatbed, ADF အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Resolution 1200 dpi အထိရှိသော ပုံရိပ်များကို Scan ဖတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Scan ဖိုင်များကို JPEG Format, PDF Format အစရှိသော Image Format မျိုးစုံဖြင့် သိမ်းဆည်းနိုင်မှာပါ။ Copy Resolution အနေဖြင့် အဖြူအမည်းနှင့်ကာလာနှစ်မျိုးစလုံး 600 x 300 dpi အထိရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Copier အချုံ့အချဲ့အနေဖြင့် 25 မှ 400% အထိ ချိန်ညှိနိုင်မှာဖြစ်သည်။ Fax အနေဖြင့် ကာလာဖြင့်ပါ ပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Resolution မှာ 300 x300 dpi ဖြစ်သည်။ Fax ပို့သည့် အမြန်နှုန်းမှာ စာရွက်တစ်ရွက်လျှင် ၄ စက္ကန့်သာ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်သည်။ Printer Memory အနေဖြင့် 512 MB ပါဝင်ပါသည်။ HP နည်းပညာများဖြစ်သည့် HP ePrint, HP ePrint Mobile Apps, HP ePrint Wireless Direct များပါဝင်သလို အခြား feautres များဖြစ်သော Google Cloud Print, Business Applications နှင့် Apple AirPrint™ များလည်း ပါဝင်ပါသည်။
အချက်အလက်များHP Deskjet IA 3835 All-in-One (Print, copy, scan, wireless, fax)
အမှတ်ပေးချက် နှင့််ဝေဖန်အကြံပြုစာ HP Deskjet IA 3835 All-in-One (Print, copy, scan, wireless, fax)
မှ Naw M.
ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးတော့ အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်။ 3835 တစ်မျိုးတည်းနဲ့ print,copy,scan အားလုံးအသုံးပြုလို့ရတယ်။
ဈေးသက်သာပြီး သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက် ဝယ်ယူဖို့အကြုံပြုပါရစေ.....
HP is well known brand and value for money! Printer is vital for office use !
မှ Pan H.
HP ပရင်တာတွေကို သဘောကျပါတယ်။ ကာလာကောင်းပြီး ပရင်ထုတ်တဲ့ speed လည်းတအားမြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စက်တစ်လုံးတည်းနဲ့ အားလုံးသုံးလို့ရတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတာပေါ့။
အရောင်ထွက်တာလှတယ်။ HP ပရင်တာတွေအရမ်းကြိုက်တယ်။